Nahoana no Mahasoa ny Manatrika Fahatsiarovana?
‘Tsara sy mahafinaritra erỳ ny miara-monina amim-piraisan-tsaina!’—SAL. 133:1.
HIRA: 18, 14
NAHOANA NY FAHATSIAROVANA NO . . .
mahasoa antsika tsirairay?
mampiray saina ny vahoakan’Andriamanitra?
mandrisika antsika hanao izay azo atao mba hampiray saina ny fiangonana?
1, 2. Inona no tena hampiray saina antsika amin’ity taona 2018 ity, ary nahoana? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
OLONA an-tapitrisany eran-tany no hiara-hivory amin’ny 31 Martsa 2018, aorian’ny filentehan’ny masoandro. Hahatsiaro ny nahafatesan’i Kristy izy ireo, toy ny fanaony isan-taona. Tsy iza izany fa ny Vavolombelon’i Jehovah sy ireo olona maro te hahalala ny tena marina. Io no fotoan-dehibe mampiray saina indrindra eto an-tany.
2 Azo antoka fa ho faly be i Jehovah sy Jesosy hahita an’ireo olona an-tapitrisany eran-tany hifandimby hanatrika an’io fotoan-dehibe io. Efa nilaza ny Baiboly fa hisy ‘vahoaka be tsy tambo isaina, avy amin’ny firenena sy foko sy vahoaka ary fiteny rehetra’ hiantsoantso hoe: “Ny famonjena dia azontsika avy amin’Andriamanitsika, izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, sy avy amin’ny Zanak’ondry.” (Apok. 7:9, 10) Tanteraka izany rehefa Fahatsiarovana. Olona maro no manome voninahitra an’i Jehovah sy Jesosy amin’io fotoana io, ka tena mahafinaritra.
3. Inona avy ny fanontaniana hovaliana ato?
3 Hamaly an’ireto fanontaniana ireto isika ato: 1) Inona no azontsika tsirairay atao mba ho vonona hanatrika Fahatsiarovana isika ary handray soa amin’izany? 2) Nahoana ny Fahatsiarovana no mampiray saina ny vahoakan’i Jehovah? 3) Inona no azontsika tsirairay atao mba hampiray saina antsika rehetra? 4) Tsy hanatrika Fahatsiarovana intsony ve isika indray andro any? Raha tsy hanatrika intsony isika, dia rahoviana izany?
INONA NO AZO ATAO MBA HO VONONA TSARA SY HANDRAY SOA?
4. Nahoana isika no tokony hanatrika Fahatsiarovana raha mbola azo atao?
4 Nahoana no tena zava-dehibe ny manatrika Fahatsiarovana? Anisan’ny fanompoana an’i Jehovah ny fanatrehana fivoriana. Azo antoka àry fa hitan’i Jehovah sy Jesosy ny ezaka ataon’ny tsirairay mba hanatrehana an’ilay fivoriana lehibe indrindra fanao isan-taona. Tiantsika ho hitan’izy ireo hoe hanatrika Fahatsiarovana foana isika, raha tsy hoe misy antony tena lehibe tsy hahafahantsika mihitsy angaha. Vao mainka i Jehovah hazoto hanoratra ny anarantsika ao amin’ny “bokin’ny fiainana”, raha asehontsika amin’ny ataontsika fa tena zava-dehibe amintsika ny fivoriana. Ao amin’io “boky fahatsiarovana” io ny anaran’izay hiaina mandrakizay.—Mal. 3:16; Apok. 20:15.
5. Inona no azontsika atao mandritra ny herinandro vitsivitsy alohan’ny Fahatsiarovana?
5 Afaka manokana fotoana isika, mandritra ny herinandro vitsivitsy alohan’ny Fahatsiarovana, mba hivavahana sy handinihana tsara hoe manao ahoana ny fifandraisantsika amin’i Jehovah. (Vakio ny 2 Korintianina 13:5.) Mila mandini-tena isika ‘mba hahitana raha ao amin’ny finoana isika na tsia.’ Eritrereto, ohatra, hoe: ‘Tena mino ve aho fa ity fandaminana misy ahy ity ihany no ampiasain’i Jehovah mba hanatanterahana ny sitrapony? Tena manao izay tsara indrindra vitako ve aho mba hitoriana sy hampianarana ny vaovao tsara momba ilay Fanjakana? Hita amin’ny ataoko ve fa tena mino aho hoe andro farany izao ary kely sisa dia hifarana ny fitondran’i Satana? Mbola matoky an’i Jehovah sy Jesosy hoatran’ny tamin’izaho nanokan-tena ho an’i Jehovah ve aho?’ (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Heb. 3:14) ‘Mizaha toetra ny tenantsika’ isika raha misaintsaina hoatr’izany, ka ho fantatsika hoe hoatran’ny ahoana marina isika.
6. a) Inona no tsy maintsy ataontsika raha te hiaina mandrakizay isika? b) Inona no ataon’ny anti-panahy iray isan-taona, ary inona koa no azonao atao?
6 Azonao atao koa ny mamaky sy misaintsaina an’ireo lahatsoratra manazava hoe nahoana no zava-dehibe ny Fahatsiarovana. (Vakio ny Jaona 3:16; 17:3.) Tsy ho afaka hiaina mandrakizay ny olona iray, raha tsy mahalala an’i Jehovah sy “maneho finoana” an’i Jesosy Zanany. Azonao atao àry ny mianatra lahatsoratra hanampy anao hifandray kokoa amin’izy ireo, raha te ho vonona tsara ho amin’ny Fahatsiarovana ianao. Nanao an’izany nandritra ny taona maro ny anti-panahy iray efa ela. Angoniny izay lahatsoratra ao amin’ny Tilikambo Fiambenana miresaka momba ny Fahatsiarovana sy momba ny fitiavan’i Jehovah sy Jesosy antsika. Averiny vakina izy ireny, mandritra ny herinandro vitsivitsy alohan’ny Fahatsiarovana, ary saintsaininy hoe nahoana ny Fahatsiarovana no tena zava-dehibe. Ampiany lahatsoratra iray na roa indraindray ny lahatsoratra efa voangony. Mamaky sy misaintsaina an’ireo andinin-teny asaina vakina alohan’ny Fahatsiarovana koa izy. Tsapany hoe mianatra zava-baovao foana izy isan-taona. Ny tena zava-dehibe anefa dia hoe mihamitombo ny fitiavany an’i Jehovah sy Jesosy isan-taona. Raha manao toy izany koa ianao, dia vao mainka ho tia azy ireo sy hankasitraka ny zavatra nataony. Handray soa bebe kokoa ianao amin’izay rehefa manatrika Fahatsiarovana.
MAMPIRAY SAINA ANTSIKA NY FAHATSIAROVANA
7. a) Inona no vavaka nataon’i Jesosy? b) Inona no porofo fa namaly ny vavaka nataony i Jehovah?
7 Ny alina nanaovana ny Sakafo Harivan’ny Tompo voalohany, dia nivavaka i Jesosy mba hiray saina toa azy sy ny Rainy ny mpanara-dia azy. (Vakio ny Jaona 17:20, 21.) Tena namaly ny vavaka nataony i Jehovah. Olona an-tapitrisany avy any amin’ny faritra maro eran-tany mantsy no mino fa naniraka an’i Jesosy i Jehovah. Miray saina izy ireo, ary ny Fahatsiarovana no fivoriana tena mampiharihary an’izany. Tafaraka amin’io fankalazana io izy ireo, na dia samy hafa firenena sy volon-koditra aza. Tsy dia fahita izany any amin’ny faritra sasany, na heverin’ny olona sasany hoe tsy mety. Mahafinaritra an’i Jehovah sy Jesosy anefa ny mahita antsika miara-manatrika ny Fahatsiarovana.
8. Inona no nolazain’i Jehovah tamin’i Ezekiela?
8 Tsy mahagaga raha miray saina isika vahoakan’i Jehovah. Efa nilaza an’izany tamin’i Ezekiela mpaminany mantsy i Jehovah. Nasainy naka sampan-kazo roa izy, ary nasainy natambatra ilay izy. “Ho an’i Joda” ny iray, ary “ho an’i Josefa” ny iray. (Vakio ny Ezekiela 37:15-17.) Izao no voalaza ao amin’ny “Fanontanian’ny Mpamaky” ao amin’ny Tilikambo Fiambenana Jolay 2016: “Nilaza tamin’i Ezekiela i Jehovah fa ho lasa firenena iray ny Israelita rehefa tafaverina any amin’ny Tany Nampanantenaina. Midika koa io faminaniana io fa ho tafaray ny vahoakan’i Jehovah mandritra ny andro farany.”
9. Inona no mitranga isan-taona ka manaporofo fa tanteraka ny faminanian’i Ezekiela?
9 Naverin’i Jehovah nalamina tsikelikely aloha ny voahosotra, nanomboka tamin’ny 1919. Nataony koa izay hampiray saina azy ireo indray. Toa an’ilay sampan-kazo “ho an’i Joda” izy ireo. Nihabetsaka avy eo ny olona nanohana an’ireo voahosotra. Manantena hiaina mandrakizay eto an-tany izy ireo, ary toa an’ilay sampan-kazo “ho an’i Josefa.” Lasa “andiany iray” àry izy ireo sy ny voahosotra. (Jaona 10:16; Zak. 8:23) Nampanantena i Jehovah hoe hatambany ireo sampan-kazo roa ireo, ka ho lasa sampan-kazo iray eny an-tanany. (Ezek. 37:19) Miara-manompo an’i Jehovah sy miray saina ireo antokon’olona roa ireo, ary iray ihany ny Mpanjakan’izy ireo, dia i Jesosy Kristy. Nantsoin’i Jehovah hoe ‘Davida mpanompony’ i Jesosy ao amin’ilay faminanian’i Ezekiela. (Ezek. 37:24, 25) Hita miharihary isan-taona hoe tanteraka ny faminanian’i Ezekiela, satria miara-mankalaza ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy ny “ondry hafa” sy ny voahosotra mbola eto an-tany. Inona anefa no azontsika tsirairay atao mba hiray saina foana isika rehetra?
INONA NO AZONTSIKA TSIRAIRAY ATAO?
10. Inona no azontsika atao mba hampiray saina antsika rehetra?
10 Inona no azontsika atao mba hampiray saina ny vahoakan’i Jehovah? Voalohany, mila manetry tena isika. Nampirisika ny mpianany hanetry tena i Jesosy. (Mat. 23:12) Raha manetry tena isika, dia tsy hihevi-tena ho ambony hoatran’ny olona eto amin’ity tontolo ity. Hanaja sy hankatò an’ireo rahalahy manana andraikitra kosa isika. Tena ilaina izany mba hampiray saina ny fiangonana. Ho faly koa i Jehovah raha manetry tena isika. “Manohitra ny manambony tena” mantsy izy, ‘fa maneho hatsaram-panahy tsy manam-paharoa amin’ny manetry tena.’—1 Pet. 5:5.
11. Nahoana ny fisaintsainana ny dikan’ny mofo sy ny divain’ny Fahatsiarovana no manampy antsika hiray saina?
11 Faharoa, ilaina ny misaintsaina ny dikan’ilay mofo tsy misy lalivay sy ilay divay mena ampiasaina amin’ny Fahatsiarovana. Eritrereto tsara izany alohan’io fankalazana io sy mandritra an’ilay izy. (1 Kor. 11:23-25) Ilay mofo dia mifanitsy amin’ny vatan’i Jesosy tsy misy ota, izay foiny natao sorona. Ilay divay indray dia mifanitsy amin’ny ra nalatsany. Tsy ampy anefa ny hoe mahazo ny dikan’ireo. Mila tadidintsika koa fa tena tia antsika i Jehovah matoa nahafoy ny Zanany ho antsika, ary tena tia antsika i Jesosy matoa nanaiky hanao sorona ny ainy ho antsika. Tsy misy olona tia antsika hoatr’izany. Ho tia azy ireo koa isika raha misaintsaina an’izany. Hoatran’ny tady mampifamatotra antsika rehetra ny fitiavantsika an’i Jehovah, ary vao mainka mampiray saina antsika.
Mampiray saina ny fiangonana isika rehefa mamela heloka (Fehintsoratra 12, 13)
12. Ahoana no nampisehoan’i Jesosy hoe tian’i Jehovah hamela heloka isika?
12 Fahatelo, mila mazoto mamela heloka isika. Voavela ny helotsika noho ny vidim-panavotana nomen’i Jesosy. Hita hoe mankasitraka an’izany isika, raha mamela an’izay nampahatezitra antsika. Diniho ilay fanoharana nolazain’i Jesosy ao amin’ny Matio 18:23-34. Eritrereto hoe: ‘Te hampihatra an’izay nampianarin’i Jesosy ve aho? Manam-paharetana amin’ny mpiara-manompo ve aho, ary miezaka hahazo izay manjo azy ireo? Vonona hamela an’izay nampahatezitra ahy ve aho?’ Marina fa lehibe kokoa ny fahotana sasany ary isika rahateo tsy lavorary, ka mety ho sarotra be ny mamela an’ilay izy. Hitantsika amin’ilay fanoharana anefa hoe inona no tian’i Jehovah hataontsika. (Vakio ny Matio 18:35.) Nohazavain’i Jesosy tsara fa raha tena mibebaka ny mpiara-manompo amintsika nefa isika tsy mamela ny helony, dia tsy havelan’i Jehovah koa ny fahotantsika. Mampieritreritra izany! Hiray saina foana isika raha mamela heloka, araka ny nampianarin’i Jesosy.
13. Nahoana no mampiray saina ny hoe mitandro fihavanana?
13 Mitandro fihavanana isika raha mamela heloka. Nilaza ny apostoly Paoly hoe tsy maintsy miezaka mafy isika mba “hitana ny maha iray ny fanahy ao anatin’ny fihavanana, izay fatorana mampiray.” (Efes. 4:3) Mandritra ny vanim-potoan’ny Fahatsiarovana ary indrindra amin’ny Fahatsiarovana, dia eritrereto tsara ny fomba itondranao olona. Eritrereto hoe: ‘Ahoana no tena ahalalana ahy? Olona zatra manao an-dolompo ve, sa olona manao izay rehetra azo atao mba hisian’ny fihavanana sy firaisan-tsaina?’ Tena ilaina ny mieritreritra an’ireo amin’io vanim-potoana io.
14. Ahoana no ampisehoantsika hoe ‘mifampizaka amim-pitiavana’ isika?
14 Fahefatra, mila maneho fitiavana toa an’i Jehovah, ilay Andriamanitra fitiavana, isika. (1 Jaona 4:8) Tsy isika mihitsy no hilaza hoe: “Tsy maintsy tia an-dry zareo aho satria mpiara-manompo amiko ry zareo, fa raha ny marina tsy tiako ry zareo.” Tsy izany no toe-tsaina tokony hananantsika, fa tokony “hifampizaka amim-pitiavana” isika, araka ny nolazain’i Paoly. (Efes. 4:2) Tsy hoe mifampizaka fotsiny anefa, fa hoe mifampizaka “amim-pitiavana.” Tsy mitovy mantsy izany. Misy olona isan-karazany ao amin’ny fiangonantsika, ary i Jehovah no nitaona azy ireny ho lasa mpanompony. (Jaona 6:44) Misy zavatra itiavany azy ireny matoa izy nanao an’izany. Isika indray àry ve no hilaza fa tsy mendrika ny hotiavintsika izy ireny? Tsy maintsy tia azy ireny mifanaraka amin’izay takin’i Jehovah isika.—1 Jaona 4:20, 21.
RAHOVIANA ISIKA NO HANAO FAHATSIAROVANA FARANY?
15. Ahoana no ahalalantsika hoe hisy farany ny fankalazana Fahatsiarovana?
15 Tsy hankalaza ny Fahatsiarovana intsony isika, indray andro any. Ahoana no ahalalantsika an’izany? Nilaza i Paoly fa isaky ny mahatsiaro ny nahafatesan’i Jesosy ny voahosotra isan-taona, dia manambara ny fahafatesan’ny Tompo izy ireo “mandra-piaviny.” (1 Kor. 11:26) Io fiaviany io ihany ilay noresahin’i Jesosy, tamin’izy niresaka faminaniana momba ny farany. Nilaza izy tamin’izay hoe izao no hitranga amin’ilay fahoriana lehibe ho avy tsy ho ela: “Hiseho eny amin’ny lanitra ny famantarana ny Zanak’olona. Dia hikapo-tratra sy hitomany ny foko rehetra eto an-tany, ary ho hitan’izy ireo ny Zanak’olona ho avy amin-kery sy voninahitra lehibe, ao amin’ny rahon’ny lanitra. Haniraka ny anjeliny amin’ny feon’ny trompetra mafy [i Jesosy], ary ireo dia hanangona ny olom-boafidiny avy any amin’ny vazan-tany efatra, avy any amin’ny faravodilanitra rehetra.” (Mat. 24:29-31) ‘Hanangona ny olom-boafidiny’ i Jesosy, izany hoe hanangona an’izay voahosotra mbola tavela eto an-tany mba ho any an-danitra. Vao manomboka kelikely ny fahoriana lehibe no hitranga izany, izany hoe alohan’ny Hara-magedona. Hiaraka amin’i Jesosy hiady sy handresy an’ireo mpanjaka eto an-tany ireo 144 000 aorian’izay. (Apok. 17:12-14) Ny Fahatsiarovana alohan’ny hahatongavan’i Jesosy hanangona ny voahosotra àry no Fahatsiarovana farany hatrehintsika.
16. Nahoana ianao no tapa-kevitra hanatrika Fahatsiarovana amin’ity taona ity?
16 Aoka àry ianao ho tapa-kevitra hanatrika ny Fahatsiarovana amin’ny 31 Martsa 2018. Ataovy izay azonao atao mba hampiray saina ny vahoakan’i Jehovah. Mivavaha aminy mba hanampiany anao hahavita an’izany foana. (Vakio ny Salamo 133:1.) Tadidio fa tsy hankalaza ny Fahatsiarovana intsony isika, indray andro any. Mandra-pahatongan’izany anefa, dia asehoy hoe zava-dehibe aminao ilay firaisan-tsaina misy amin’io fotoan-dehibe io, ary ataovy izay azonao atao mba hanatrehana azy io.